Enyemaka Iji Ghọta Bible
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Julaị 1, 2001
GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Ossetian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
BIBLE bụ akwụkwọ pụrụ iche. Ndị dere ya na-ekwu na ha ji ike mmụọ nsọ Chineke dee ya, ihe ndị e dekwara n’ime ya na-enye ihe àmà dị ukwuu na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu. (2 Timoti 3:16) Tinyere ihe ndị ọzọ, Bible na-egosi ebe anyị si bịa, ihe mere anyị ji nọrọ n’ebe a, na ebe anyị na-aga. N’ezie, ọ bụ akwụkwọ kwesịrị ka anyị tụlee ya!
Ikekwe ị gbalịwo ịgụ Bible ma ya ana-esiri gị ike nghọta. Ikekwe ị maghị ebe ị ga-agụ iji chọta azịza nye ajụjụ gị dị iche iche. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụghị nanị gị ka ọ na-eme. Ọnọdụ gị yiri nke otu nwoke biri ndụ na narị afọ mbụ. O ji ụgbọ ịnyịnya si Jerusalem na-aga obodo ya, bụ́ Etiopia. Onye ọrụ ọchịchị Etiopia a ji olu dara ụda na-agụ akwụkwọ amụma Bible bụ́ Aịsaịa, bụ́ nke e dere ihe karịrị narị afọ asaa tupu mgbe ahụ.
Na mberede, otu nwoke nke gbatara n’akụkụ ụgbọ ịnyịnya ya kelere ya. Nwoke ahụ bụ Filip, onye na-eso ụzọ Jisọs, ọ jụkwara onye Etiopia ahụ, sị: “Ị̀ na-amata ihe ị na-agụ?” Onye Etiopia ahụ zaghachiri, sị: “Ee e, n’ihi na m̀ ga-esi aṅaa pụ ịmata, ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-edu m?” Mgbe ahụ, ọ kpọbatara Filip n’ụgbọ ịnyịnya ahụ. Filip kọwaara nwoke ahụ ihe akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ ọ nọ na-agụ pụtara ma gaa n’ihu ikwusara ya “ozi ọma [banyere] Jisọs.”—Ọrụ 8:30-35.
Dị nnọọ ka Filip nyeere onye Etiopia ahụ aka ịghọta Okwu Chineke ogologo oge gara aga, Ndịàmà Jehova na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta Bible taa. Ha ga-enwe obi ụtọ inyekwara gị onwe gị aka. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ kasị mma ịmụ Bible n’ụzọ dị n’usoro, na-amalite n’ozizi ndị bụ́ isi nke Akwụkwọ Nsọ. (Ndị Hibru 6:1) Ka ị na-aga n’ihu, ị ga-enwe ike ịghọta ihe Pọl onyeozi kpọrọ “nri siri ike”—ya bụ, eziokwu ndị miri emi karị. (Ndị Hibru 5:14) Ọ bụ ezie na ọ bụ Bible ka ị na-amụ, mbipụta ndị ọzọ—ihe ndị na-enye aka ịmụ Bible—pụrụ inyere gị aka ịchọta na ịghọta akụkụ Bible ndị kwuru okwu n’isiokwu dịgasị iche iche.
A pụrụ idokwa ọmụmụ ihe n’oge nakwa n’ebe ga-adị gị mma. Ọbụna ụfọdụ na-eji telifon amụ ihe. A dịghị enwe ọmụmụ ihe ahụ dị ka a ga-asị na a nọ n’ọnụ ụlọ klas; ọ bụ ndokwa gị na onye ga-amụrụ gị ihe ga-eme bụ́ nke a ga-eme ka o kwekọọ n’ọnọdụ gị, gụnyere nzụlite na ikike mmụta gị. Ọ dịghị gị mkpa ịkwụ ụgwọ maka ọmụmụ Bible dị otú ahụ. (Matiu 10:8) A dịghị ele ule na ya, a gaghịkwa emenye gị ihere. A ga-aza ajụjụ gị dị iche iche, ị ga-amụtakwa otú e si abịaru Chineke nso. Otú ọ dị, n’ihi gịnị ka i ji kwesị ịmụ Bible? Tụlee ihe ụfọdụ mere ịmụ Bible pụrụ iji mee ka i nwekwuo ọṅụ ná ndụ gị.
N’ihi Gịnị Ka A Ga-eji Mụọ Bible?
Ṅụrịa Ọṅụ n’Ihi Inweta Ihe Ọmụma Banyere Jehova
Kere Òkè N’ọṅụ Nke Inye Ihe!
Ekwela Ka Inwe Obi Abụọ Bibie Okwukwe Gị
Osisi Ndị Na-adịru Ogologo Oge
Anyị Nwara Jehova
Nzukọ Kwa Afọ October 6, 2001
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Julaị 1, 2001
Julaị 1, 2001
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Julaị 1, 2001